शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री
काठमाडौं । एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा शेरधन राई निर्वाचित भएका छन् । यससँगै उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएपछि एमालेले दलको नेता चुन्न..
डोरमणि पौडेल प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने, अष्टलक्ष्मीले चुनाव हारिन्
काठमाडौं । एमाले प्रदेश ३ को संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेल निर्वाचित भएका छन् । यससँगै उनलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । संसदीय दलको नेता चुन्न एमालेले..
जाँदाजाँदै १४ करोड बाँड्ने तयारीमा देउवा सरकार
काठमाडौँ । सत्ताबाट बहिर्गमन हुने बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप १४ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेका छन्। सम्भवतस् अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन..
राष्ट्रिय सभामा वाम गठबन्धनलाई ३६ सिट, कांग्रेसलाई १३ सिट (विजेताको नामसहित)
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ३६ सिट जितेको छ । ५६ सिटमध्ये एमाले २५ सिट र माओवादी केन्द्रले ११ सिट जितेको हो। त्यस्तै, कांग्रेसले १३ सिट जितेको छ । संघीय समाजवादी..
ट्रम्पको संकट टर्‍यो, दुई वर्षको बजेट पास
अमेरिकाको सिनेटले आउँदो दुई वर्षका लागि रक्षा तथा अरु केही आन्तरिक योजनाका लागि चार सय अर्ब डलरको बजेट पास भएको छ । रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताबिच भएको वार्तापछि बजेट..
यि हुन प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री
काठमाडौं । प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीको विवाद माओवादीले टुंगो लगाएको छ । पूर्व ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सबै नेताहरु सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको हो । शाही कालीकोट प्रदेश ख..
अजेय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको सवा २ अर्ब रुपैयाँ नरोक्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री प्रा लिका अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट ल्याएको करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ नरोक्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सो..
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा निर्मित ४७ घर आज हस्तान्तरण गरिँदै
काठमाडौं । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा रौतहटमा निर्मित सन्तपुर एकिकृत नमूना बस्ती आज हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको पहलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ८..
बिकु सहकारीले गरिबीको मापन गर्ने
काठमाडौं । नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकास्थित बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले नेपालमै पहिलो पटक सदस्यहरूको बहुआयामिक गरिबी मापन गर्ने भएको छ । बहुआयामिक विधिमा सदस्यहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर..
घरमा चर्पी नराख्नेलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने
वीरगञ्ज । पश्चिमी पर्साको बिन्दसाविनी गाउँपालिकाले घरमा चर्पी नराख्ने व्यक्तिलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उर्दी गरेको छ । गाउँपालिकाले तीन दिनभित्र आ–आफ्नो घरमा चर्पी नराखेमा सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता,..
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट देख्दा झुक्किन्छन् ट्राफिक, कुन सवारीमा कस्तो इम्बोस्ड नम्बर ?
काठमाडौं । उपत्यकामा इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका सवारीसाधन गुड्न थालेपछि सर्वसाधारण मात्र नभई अधिकांश ट्राफिक प्रहरी नै झुक्किने गरेका छन् । ‘नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्दै आएकामा इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका सवारीसाधन आउँदा शुरुशुरुमा..
यी हुन दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री
धनुषा । संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश नं २ मा संसदीय दलको नेतामा मो लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ । यससँगै राउतलाई प्रदेश नं २ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ..
पार्टी एकताका लागि एमालेले धेरै त्याग गर्नुपर्छ : वामदेव
काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि एमाले बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारीको बीसौं स्थापना दिवसमा गौतमले पार्टी एकताका लागि ठूलो पार्टी जिम्मेवार हुने भएकाले माओवादी..
भिआईपीको सवारीमा गाडी नरोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं । विशिष्ठ ब्यक्तिहरुको सवारी तथा यात्राको अवधिमा सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न तथा उनीहरुको सवारी साधन नरोक्नको लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ..
वाम गठबन्धन बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्री भ्रमणको चर्चा
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता संयोजन समिति बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणबारे चर्चा भएको छ। स्वराज दुईदिने भ्रमणका लागि आजै नेपाल आइपुगेकी छिन्। माओवादी केन्द्रका..
होटलमा सांसदलाई छुटः कोठामा ४०, भातमा १५ प्रतिशत
हेटौंडा । प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुन हेटौंडा आइपुगेका सांसदहरुलाई स्थानीय होटल व्यवसायीले रूममा लाग्ने शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी खानामा १५ प्रतिशत छुट दिने भएका..
चन्द्रग्रहणमा विज्ञान मान्नेले खानुस्, संस्कार मान्नेले नखानुस्: खगोलशास्त्री आचार्य
काठमाडौं । बुधबार साँझ ५स्३२ देखि खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै छ। चन्द्रग्रहण बेला खाना खान हुँदैन भन्ने पूर्वीय संस्कार छ। वैज्ञानिकहरूले भने ग्रहणमा खाना खाँदा के असर पर्छरु भन्ने पत्ता लगाइसकेका..
गुणात्मक आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुक संघीय संरचनाअनुसार अघि बढेको र तीन तहको सरकार भएकाले देशको आर्थिक व्ययभार बढ्नु स्वभाविक भएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार..
काठमाडौं । माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति अनुसार, बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी ६ बजेर..
यस्तो छ सरकारले तोकेको नयाँ मर्यादाक्रम, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दा प्रदेश प्रमुख माथि
काठमाडौं । सरकारले संघीय शासन लागू भएपछि स्थापित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेटेर नयाँ मर्यादाक्रम तोकेको छ । पुरानो मर्यादाक्रम खारेज गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय..
अवैध धनलाई प्रोत्साहन नगर्न अर्थविद्हरूले दिए ओलीलाई सुझाव
काठमाडौं । अर्थविदहरुले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अर्थविद डा शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने धारणा..
१ सय ५२ वर्षपछिको दुर्लभ खगोलीय घटना, कुन राशीलाइ कस्तो फल
काठमाडौं । माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुधबार बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । माघ १७ गते बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी ६ बजेर ३६ मिनेटमा..
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २४ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सोमबार उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिनसम्म २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी..
काठमाडौंमा १२ जना ‘नक्कली डाक्टर’ पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा छापा मारेर १२ जना ‘नक्कली डाक्टर’ लाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको समन्वयमा..
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर फर्छ्योट आयोगमार्फत अर्बौं रुपैयाँको कर..
६० र ४० को भागबन्डा ७० र ३० झर्यो, माओवादीले २ मुख्यमन्त्री र २ सभामुख पाउने
काठमाडौं । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा दुई पार्टीबीच ७० र ३० प्रतिशतको भागबन्डा हुने भएको छ। यसअघि प्रदेश सभा चुनावमा एमाले र माओवादी ६० र ४० प्रतिशत उम्मेदवार उठाएका थिए। नेकपा एमाले..
सन्दिप लामिछानेलाई दिल्ली डेयर डेभिल्सले ३२ लाख रुपैयाँमा किन्यो
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि भएको खेलाडी अक्सनमा पहिलो पटक नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछानेलाई दिल्ली डेयर डेभिल्सले भारू २० लाखमा खरिद गरेको छ। ५ सय ७८ जनाको..
बाम सरकारले मधेशका समस्या सम्बोधन गर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले बाम गठबन्धन मधेशलाई सम्बोधन गर्ने कोसिसमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीको विद्यार्थी संगठनका महासचिव चन्द्र भुषण साहसहितका २ सय जना..
देउवा सरकारको अर्को निर्णय:बाँदरमुढे घटनाका ३८ जना शहीद घोषित
काठमाडौँ । बुधबार ६५ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई बृद्दभत्ता र भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको सरकारले आज चितवनको बाँदरमुढे घटनामा मारिएका ३८ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने..
एमालेले भन्यो – वृद्धभत्ताको निर्णय सस्तो लोकप्रियता र गैरजिम्मेवारपूर्ण
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले बुधबार ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णयलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको गैर जिम्मेवार काम भनेको छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लागू..
Results 1994: You are at page 31 of 67